ဘယ်လို Barnaul မှ Novosibirsk ကနေအဲဒီကိုရောက်ဖို့မငါ့ကိုပြောပြပါ ??? ဘယ်အရပ်ကသင်သည်ပျံသန်းကြသလဲ Barnaul နှင့်ရထားဘူတာရုံဖြင့် ... အကယ်. ညဦးယံအချိန် .. သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေဆိပ် ... .vo သင်နံနက်ယံ၌ရောက်ရှိမည်အဖြစ် .. .. အကယ်. .duy ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံရှိပါတယ်။ ။ နောက်ပိုင်း ...
မွန်တီနီဂရိုး Russian သို့မဟုတ်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော ရထားအဲဒီမှာရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? နှင့်ပင်လယ်အဘယျသို့ရှိသနည်း အခုတော့နီးပါးရုရှား။ ရုရှားအရာရာဝယ်သည်ရထားမော်စကို-ဘားအားဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, သာ Schengen ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ...
စိန့်ပီတာစဘတ်မှာဆက်နေရန်အကောင်းဆုံးအဘယ်မှာရှိသနည်း အကောင်းဆုံးကတော့, သင်တန်း၏, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးသကဲ့သို့, ဗဟိုမှာရပ်တန့်။ နှင့်တော့ဘူးဒီနေရာမှာဟိုတယ်များ၏ရွေးချယ်မှုကို။ အဲဒီမှာစျေးသိပ်မကြီးတဲ့နေထိုင်ရန်အဆောင်များဖြစ်ကြပြီး ...
ဘူတာရုံကနေဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မီတာ။ အလက်ဇန်းဒါးဆေးရုံသို့သင်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ကရုဏာသည်မည်သည့်နေရာမှလာသနည်း။ ? မက်ထရိုဘူတာ "Prospect Bolshevikov" 161st မှလွဲ။ မည်သည့်လမ်းရထားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကား။
ဘယ်လိုပိုကောင်းမော်စကိုကနေ Taganrog ရလေ့ကျင့်ဖို့နဲ့ဘယ်လောက်လမ်းမပေါ်တွင်အချိန်? ဟုတ်ပါတယ်, Rostov မှပိုကောင်းစီးနှင့်ရထား / မီးရထားဘူတာရုံဆန့်ကျင်ဘက်တည်ရှိပြီးသောဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှရှိမယ့် 1chas လွန်း။ ...
အဆိုပါ Kursk ဘူတာရုံမှ Sheremetyevo လေဆိပ်ကနေရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး? နှင့်မည်မျှကြောင့်ခရီးသွားကုန်ကျလိမ့်မည်နည်း ost ။ Sheremetyevo-1 လေဆိပ် Sheremetyevo အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘတ်စ်ကား: 200m, 949 851 ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်။ Metro မြစ်ဘူတာ ...
အဘယ်အရာကိုဖိအားအကောင်းဆုံးပိုက်ဖမ်းမိသလဲ? စားပွဲ၏ပျမ်းမျှနေ့စဉ်လေထုဖိအားများ၏ပြင်းအားအပေါ်ရည်ညွှန်းနေ့စဉ်အစာစားချင်စိတ်ပိုက်မှီခိုအတွက်တင်ပြပေမယ့်ရှင်းလင်းပြတ်သား၏ရည်ရွယ်ချက်လုံးကိုတူညီတဲ့ပြသ ...
Anapa, Vityazevo သို့မဟုတ် Dzhemete ထက်ဘာကပိုကောင်းသလဲ။ Vitazevo - နို့ဘူးရွာ - အားလုံးစျေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကမ်းခြေက! ကမ်းခြေပါ ကမ်းခြေများတွင်ပြeverywhereနာသည်နေရာတိုင်းဖြစ်သည်။ အိမ်သာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယူသို့မဟုတ်အသုံးမပြုပါနှင့်။
Suzdal ဖို့မော်စကိုကနေဘယ်လောက်ကြာသွားပါသလော အဘယ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အစွမ်းအစ၌ယုံကြည်မှု၏ထိုကဲ့သို့သောမရှိခြင်း? ပုံမှန်ကျွန်မ (မပါ, alas, ငါတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းများဆိုတာကိုသတိရရဲ့ကုန်အံ့), ကောင်းတစ်ဦးဟုပြောလိမ့်မယ် ...
ဆင်ခြေဖုံးရှိလမ်းလျှောက်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်နေရာများတွင်မည်သည့်နေရာတွင်လမ်းလျှောက်နိုင်သနည်း။ ရွေးချယ်ပါ: သဘာဝနှင့်အနုပညာ။ မော်စကိုနယ်သည်အစိမ်းရောင်သစ်တောများနှင့်အပြာရောင်ကန်များ၏မြေဖြစ်သည်။ မော်စကို၏နယ်မြေတစ်ခုလုံး၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုသစ်တောများကသိမ်းပိုက်ထားသည်။
ဘတ်စ်ကားဖြင့် Anapa မှ Adler သို့လား? ဒါမှမဟုတ်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလား။ ထို့အပြင်ဤဒေသ၌အပန်းဖြေအနားယူပါ - အနိုရာ၊ နိုရာရာရှစ်၊ ဂယ်လင်ဂျစ်၊ ကာဒါဒင်ကာ၊ အဘယ်ကြောင့်ရွေ့လျားမှုနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောညှဉ်းဆဲခြင်း။ ဒါ ...
Simferopol ကနေအနက်ရောင်ပင်လယ်ဘယ်လောက်ဝေး ?? Yalta စေရန်, Sevastopol 1 နာရီ drive ကိုစက်သင်သည် .Vot နှင့်ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေပေးဆောင်။ N6e အလွန်က Black သွားကြဖို့ပင်လယ်ပြင်နှင့် horoshschee spa မှာလိုအပ်ပါတယ် ...
Novorossiysk မှ Sochi သို့မည်မျှအချိန်နှင့်ကီလိုမီတာမည်မျှရှိသည်ကိုနororossiyskမှ Sochi သို့လမ်းဖြင့် ၂၉၆ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိသည်။
Megapone ပေါ်မှာ roaming ကိုဘယ်လိုဖယ်ရမလဲ။ အော်ပရေတာကိုခေါ်ပါ အကယ်၍ သင်သည်“ Roaming ကိုဖယ်ရှားပါ” ဆိုလျှင်သင်၏ဖုန်းသည်အိမ်တွင်းဒေသ မှလွဲ၍ နေရာတိုင်းတွင်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ ပိုက်ဆံသည်အမှန်ပင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ဖုန်းခေါ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Tuapse မှ Gelendzhik Bass သို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ။ မဝေးပါ။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် - လိပ်စာ - Krasnodar ဒေသ၊ Tuapse, st ။ Zhukova,6တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ +7 (86167) 5-97-20, 2-28-46 Gelendzhik တွင်မီးရထားမရှိ။ တိုက်ရိုက် ...
Severobaykalsk မြို့မှာလေယာဉ်ဖြင့်အဲဒီကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။ Severobaykalsk city အထွေထွေအချက်အလက်များပထဝီအနေအထား - ပထဝီအနေအထား - ဆိုက်ဘေးရီးယားအရှေ့ပိုင်း၊ မော်စကိုလတ္တီတွဒ်။ Baikal ရေကန်၏မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်း ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,370 စက္ကန့်ကျော် Generate ။